युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः पुस २७, २०७४ - साप्ताहिक
सबैभन्दा पहिले त व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्छ । रोजगारीको अवसर कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बजार व्यवस्थापन साथै नयाँ प्रविधिको विकास एवं प्रयोग हुनुपर्छ ।
यसमा सरकारले नै काम गर्नुपर्छ । म २००२ अगस्टमा कतार आएको हुँ । बीच–बीचमा नेपालमै केही गर्छु भनेर कतार न छाडेको पनि होइन । उमेर र ज्यानले साथ दिँदासम्म युवाहरू विदेश पुग्छन् । यो सबै रोक्ने हो भने रोजगारीले मात्र पुग्ला जस्तो लाग्दैन, नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । होइन भने यो कुरा चुनावी नाराबाहेक केही हुनेछैन ।
अर्सद अलि, कतार
रणनीति यस्तो बनाउनुपर्छ कि कोही देश छोडेर जानै नसकोस् । देशमै पैसा कमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कसैले पनि अरूको देशमा रगत, पसिना बगाउनु नपरोस् । देशभक्ति र विकासले युवाहरूलाई यसरी लिप्त बनाइयोस कि जे गर्छु आफ्नै देशमै गर्छु भन्ने भावना पलाओस् । पैसाको मूल्य बढोस् तर खाद्यान्न, रासन–पानी आदिको मूल्य कम होस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो रगत पसिना बगाएर कमाएको कमाइबाट उठाइएको करले जनतालाई राहत प्रदान गरोस्, तर नेता तथा राजनैतिक पार्टीहरूको भुँडी नभरियोस् ।
सरकारले रोजगारीका लागि उचित वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । बन्द भएका उद्योग कलकारखानाहरू खोल्न पहल गर्नुपर्छ । गरिखान खोज्नेहरूलाई सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण सहयोग मिलाइदिनुपर्छ । विदेश जान एयरपोर्टमा जम्मा भएका युवा–युवती हुन् वा भारततिर पलायन हुन खोज्नेहरू नै किन नहुन् । उनीहरूलाई रोकी स्वदेशमा रोजगारीका लागि सहज वातावरण स्थापित गर्ने ग्यारेन्ट दिन सक्नुपर्छ ।
युवा पलायन रोक्न आकाश फोर्नु पर्दैन, तारा झार्नु पर्दैन । देशमा गरी खाने वातावरण छैन । केही गर्न खोज्यो भने उचाल्ने र पछार्ने मात्र भेटिन्छन् । सहयोग गर्ने कोही फेला पर्दैनन् । सरकारी निकायले पनि वास्ता गर्दैन । यो सब फोहोरी राजनीतिले गर्दा हो । युवा पलायन रोक्न राजनीतिले सही बाटो लिनुपर्छ ।
यसका पछाडि एउटा असल अभिभावकको कमी देख्छु म । छोराले देशमै केही गर्छुभन्दा २०/३० लाख नपत्याउने अनि विदेश जान्छुभन्दा लोन खोजेर भए पनि पठाउने चलन छ । राज्यलाई दोष थोपर्दै हामी आफैं पनि अनेकन गल्ती गर्दैछौं ।
प्रयोजन हेरेर पासपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जो केही महिनाभन्दा बढीलाई बाहिर जान चाहन्छ उसलाई पासपोर्ट दिन बन्द गरिनुपर्छ । युवाहरू स्वत: पलायन हुनबाट रोकिन्छन् ।
खासै ठूलो केही गर्नु पर्दैन । पहिले हामी आफैंले कामलाई सानो–ठूलो भन्नु हुँदैन । अर्को कुरा आजको भोलि नै फल नखोजी दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ अनि खेतीमा विशेष जोड दिनुपर्छ । काम गर्न नै नखोज्ने अनि कहाँबाट हुन्छ ? मेरो पसलमा एउटा मान्छे खोजेको अहिलेसम्म पाएको छैन के भनूँ ?
देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । युवाहरूको क्षमता सदुपयोग गरी देशमा कलकारखाना बढाउन आवश्यक छ । सोर्सफोर्सको अन्त्य गरी क्षमतावान् व्यक्तिले मौका पाउन जरुरी छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्फ्यु जारी गर्नुपर्‍यो, म्यानपावर कम्पनीमा ताला लगाउनुपर्‍यो अनि देशको सिमाना कडाभन्दा कडा गर्नुपर्‍यो । यी कुरामा ध्यान दिए युवा पलायन अवश्य रोकिन्छ ।
नेपाली युवायुवती लाई खाडि मुलुकमा निषेध नगरेसम्म र खुला भारतीय सीमा नाका बन्द नगरिएसम्म युवा पलाएन रोकिँदैन ।